Mogadishu Journal » 2017 » August » 13
Mjournal :-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku dhawaaqay in cudurka dabaysha laga cirib tiray guud ahaan dalka muddadii sadexdii sano ahayd ee lasoo dhaafay. Farmaajo oo ka hadlay munaasabad dowladdu ay kusoo bandhigaysay...
Mjournal : – Dayuurad gaar ah oo uu la socdo Shiikh Mukhtaar Roobow Abu Mansuur ayaa goor dhow ka soo duushay magaalada Xudur ee gobolka Bakool. Waxaa sidoo kale dayuurada la socda wasiirka gaashaandhiga Somalia iyo saraakiil ka tirsan taliska nabad sugida Soomaaliya NISA....
Mjournal :- Qareenada u doodaya Musharaxiintii cabashada ka keenay doorashadii xubnaha aqalka hoose ayaa ku baaqay in la fuliyo go’aankii ay dhowaan soo saartay Maxkamada sare ee dalka kaasoo lagu laalay kuraasta 8 ka mid ah xildhibaanada Baarlamanka, laguna dalbanayey in dib...
Mjournal :-Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya Yuusuf Garaad Cumar ayaa maanta lagu waddaa in uu hortago Xildhibaanada Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya. Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya oo la hadlay Risaala ayaa sheegay sababta Wasiirka loogu...
Mjournal :-Orodyahanka asal ahaan kasoo jeeda Soomaaliya balse u orda Britain, Maxamed Faarax (Mo Farah) ayaa xalay ku guuldareystay inuu hanto billada dahabka orodka shanta kun ee mitir ee tartanka ciyaaraha atleetikada aduunka ee ka soconaya magaalada London. Farah, wuxuu ku...
Mjournal :-Wadaadka lagu magacaabo Sheekh Muqtaar Cali Roobow (Abuu Mansuur) ayaa isku soo dhiibay Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, sida uu Risaala u xaqiijiyay Taliyha Ciidanka Booliska gaarka ah ee maamulkaas Shiine Macalin Nuurow. Taliyaha ayaa sheegay in Abuu Mansuur...
Mjournal :-Guddiga Qaranka ee Xuquuqul Insaanka ee Kenya ayaa shaaca ka qaaday in 24 ruux ay ku geeriyoodeen rabshadihii maalmo ka hor ka dhacay dalkaas. Rabshadan ayaa ka dambeeyay, markii Hoggaamiyaha mucaaradka Raila Odinga uu qaadacay natiijadii horu dhaca aheyd ee...
Mjournal :-Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa ku amray Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Ahna Duqa Muqdisho inuu shaqaaleysiiyo illaa 1,000 dhalinyaro. Hadalkan ayuu Ra’iisul Wasaaraha ka jeediyay Munaasabad xalay ka dhacday Muqdisho, kaasoo lagu maamuusayay...